के कपाल रंग्याउँदा छालामा असर पर्छ ? कपालको सुन्दरताका लागि नै लगाइन्छ मेहन्दी – Khabar Patrika Np
के कपाल रंग्याउँदा छालामा असर पर्छ ? कपालको सुन्दरताका लागि नै लगाइन्छ मेहन्दी
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: २१:३१:०८
कपाल फुलेको छ। बेला–बेला चिलाउँछ। यी दुवै समस्या समाधानका लागि भगीरथ गोतामेको तरिका छ, मेहन्दी लगाउने। दुई दशकदेखि उनले यही तरिका अपनाइरहेका छन्। काठमाडौं, नागार्जुन–७ का गोतामे भन्छन्, ‘मेहन्दी लगाउँदा जवान भएको महसुस पनि हुन्छ।’ कपाल झर्नबाट रोक्न मेहन्दी लगाएको बताउँछिन्, अमृता श्रेष्ठ। उनी भन्छिन्, ‘कपालको सुन्दरताका लागि नै लगाइन्छ मेहन्दी।’
छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार कपालमा लगाइने कलर (रंग) तीन किसिमको हुन्छ। कुनै कलर लगाएपछि पखालेर गइहाल्ने टेम्पोररी प्रकृतिको हुन्छ। सेमिपरमानेन्ट खालको कलर केही दिनसम्म कपालमा रहन्छ। परमानेन्ट कलर केही महिनासम्म कपालमा बसिरहन्छ।
पखालेपछि तुरुन्तै गइहाल्ने खालको कलर लगाउँदा स्वास्थ्यमा असर नगर्ने डा. कर्णको भनाइ छ। ‘टेम्पोररी खालको कलर लगाउँदा भित्री तहमा गएर नराम्रो असर गर्ने सम्भावना हुँदैन। तर, सेमिपरमानेन्ट र परमानेन्ट खालको कलरमा केमिकल मिसाइएको हुन्छ। छालाको माथिल्लो भागबाट कलर भित्र पस्छ। असर गर्छ’, डा. कर्णले भने।
सेमिपरमानेन्ट र परमानेन्ट खालको कलर भित्र पसेका कारण नुहाएर पनि नजाने हुन्छ। ‘भित्र गएपछि कलरको भोल्युम बढ्छ। छालाभित्र गएपछि केही तŒव ग्रहण गर्छ। छालामा बस्छ। आकार बढ्दै गई भित्रभित्रै फिँजिन्छ। बाहिर निस्कन पाउँदैन’, डा. कर्णले बताए।
लामो समयसम्म कपालमा कलर गर्ने व्यक्तिको दीर्घकालमा असर देखिन्छ। अनुहारको छाला र घाँटीको छालामा देखिन्छ। डा. कर्णले भने, ‘कपालमा कलरिङ गर्ने ज्ञान भए पनि त्यसले पार्ने असरको अज्ञानता धेरैमा देखिन्छ।’
गर्मीमा स्विमिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कपालमा प्रयोग गरिने कलर मात्र होइन स्विमिङ पुलको पानीमा प्रयोग हुने केमिकलले पनि कपाललाई कडा बनाउन सक्छ। त्यसैले स्विमिङ क्याप लगाउनुपर्ने डा.कर्णको सुझाव छ। स्विमिङपछि सेम्पु र कन्डिसनर प्रयोग गर्नुपर्छ।